USolwazi Suna Kassier edingida ukuxhumana phakathi kwe-COVID-19 nokukhuluphala, eluleka ngokuthi abantu bangakugwema kanjani ukukhuluphala.
Ukuxhumana Phakathi kwe-COVID-19 Nokukhuluphala
USolwazi Suna Kassier woMkhakha we-Dietetics and Human Nutrition e-UKZN uchaze indima edlalwa ukukhuluphala kubhubhane i-COVID-19, weluleka abantu abasemgonqweni ukuthi bangadangali, bagade nengozi yokukhuluphala.
I-National Institute of Communicable Diseases yaseNingizimu Afrika yagcwalisa ukuthi kukhona owokuqala owayesetheleleke nge-COVID-19 ezweni mhla zi-5 kuNdasa, emva kosuku lokulwa nokukhuluphala emhlabeni i-World Obesity Day. U-Kassier uphawule ukuthi kuningi okufanayo ngobhubhane olusha nokukhuluphala kunaloko okwaziwayo.
‘Kokubili ukukhuluphala ne-COVID-19 kuthathwa njengezifo, ngaphezu kokuthathwa njengobhubhane oluhlasele emhlabeni,’ kusho yena. 'Ukukhuluphala kuqala ukubonakala njengento enkulu ekuthelelekeni ngegciwane, kanti loku kubonakala kulabo abangaphansi kweminyaka engama-60.’
U-Kassier uchaze wathi ukukhuluphala kuhambisana nobungozi obukhulu bokuba nezifo ezingathelelelani njengoshukela i-Type 2, inhliziyo, inhliziyo eshaya ngamandla, uhlangothi, nesifuba. Ushukela i-Type 2 nenhliziyo eshaya ngamandla kwehlisa amandla amasosha omzimba kanti loku kugula kungakhuphula i-BP kulabo abavele benenhliziyo eshaya ngamandla.
Ukutheleleka yizifo zokuphefumula njenge-COVID-19 kungabeka ukuphefumula kwabantu abakhuluphele engcupheni enkulu. Abantu abakuleso simo sokuphefumula basengcupheni yokuhonqa, isifuba namaphaphu.
U-Kassier ubalule ukuthi ngemva kweGibhithe, iNingizimu Afrika ilele isibili njengezwe elinabantu abakhuluphele ezwekazini njengoba inezinga elingama-28.3%, okuyenza ukuthi ibe yindawo ekhathazanayo ngokwezempilo.
‘Nakuba ukukhuluphala kuvame ukuthathwa ngokuthi kusho ukuphila kahle, kodwa sekubukwa njengento ehambisana nokuswela ukudla nendlela yokudla eshoda ngezinhlobo zokudla ezehlukene, okuyinto ebhekene nabantu abaningi baseNingizimu Afrika,’ kusho yena.
‘Njengoba izwe ligxila kwimpilo yasemadolobheni nabantu sebemandla ekudleni ukudla okusheshayo okugcwele amafutha, usawoti, noshukela, nokunomsoco omncane wamavithamini namaminerali, kuyanda ukukhuluphala.’
Njengoba isikhathi somgonqo sivale ithuba lokunyakazisa umzimba, okuyinto esizayo ukunciphisa amazinga okudangala nawexhala nokwenza inhliziyo ishaye ngendlela efanele nomuntu angakhuluphali kakhulu, uKassier uphakamise izinto eziningi umuntu angazenza ukunyakazisa umzimba.
‘Ungadansa nezingane zakho nomndeni wakho esikhundleni sokudla oncamnce, nithole umuntu wasekhaya ozonijimisa noma nibe nohlelo lokujima kwi-app noma lwe-YouTube,’ kusho yena.
Uma unengadi, ungakhipha ukhula, ugunde igceke noma uqubule izinsimbi zokuzakhela ezinjengamabhodlela obisi noma amanzi, njengoba ilitha lamanzi lilingana nekhilogremu. Yenza ama-push-up, usebenzise isihlalo uma ungakwazi ukuwenza phansi. Uma niyothenga ukudla, pakani buqamama ukuze nizothola ithuba lokuhamba nisheshe,’ kusho yena. ‘Uma uhamba ngezinto zomphakathi, sebenzisa lonke ithuba olitholayo ukuhamba usheshe.’
U-Kassier ubalule izinto ezithembisayo ebantwini baseNingizimu Afrika njengokuthi umgomo wesifo sofuba i-Bacillus Calmette Guerin, okugonywa ngawo izingane zaseNingizimu Afrika uma zizalwa, ungawasiza amasosha omzimba kwi-COVID-19 ngokunciphisa izinga lokuxineka kwamaphaphu.
Abafundi Ababili Base-UKZN Balindele Ukudlula kwe-COVID-19 e-Algeria
Iqembu Likanobhutshuzwayo Leseka Impi Yokulwa ne-COVID-19
Ingabe Izikhungo Zemfundo Ephakeme Zezwe Zikulungele Ukufundisa Ezamabhizinisi Ngobuchwepheshe?